Iindaba - Ngaba iityhubhu zingalufikelela njani uLungelelwano lwamaTire ubukhulu?
Imibhobho yemoto yabakhweli
Iibhasi kunye neeTyhubhu zeTraki
Icandelo lezolimo kunye ne-OTR Tube
Iibhayisekile kunye neeTyhubhu zeSithuthuthu
Qubha iityhubhu zemidlalo yekhephu
Ngaba iityhubhu zingakulungela njani ukuHamba koBungakanani beTire?
Ngaba iityhubhu zingakulungela njani ukuKhanya kobungakanani beTire?
Iityhubhu zangaphakathi zenziwe ngerabha kwaye ziyaguquguquka. Ziyafana neebhaluni kuba ukuba uqhubeka uzinyusela ziyaqhubeka zisanda de ekugqibeleni zigqabhuke! Akukhuselekanga ukufakela ngaphezulu iityhubhu zangaphakathi ngaphaya kobungakanani obuqiqayo kunye nobungakanani obucetyiswayo njengoko iityhubhu ziya kuba buthathaka njengoko zoluliwe.
Uninzi lweetyhubhu zangaphakathi ziya kugubungela ngokukhuselekileyo ezimbini okanye ezintathu ubukhulu beetayi ezahlukeneyo, kwaye obu bungakanani buya kuhlala buqwalaselwe kumbhobho wangaphakathi njengobungakanani obahlukileyo, okanye uboniswe njengoluhlu. Umzekelo: Ityhubhu yetayara yangaphakathi ityhubhu inokumakishwa njenge-135/145 / 155-12, oko kuthetha ukuba kufanelekile kubungakanani bamatayara anokuba li-135-12, 145-12 okanye 155-12. Ityhubhu yangaphakathi yokucheba ingca inokumakishwa njenge-23X8.50 / 10.50-12, oko kuthetha ukuba kufanelekile kubungakanani bamatayala angama-23X8.50-12 okanye 23X10.50-12. Ityhubhu yangaphakathi yetrektara inokumakishwa njenge-16.9-24 kunye ne-420 / 70-24, okuthetha ukuba kufanelekile kubungakanani bamatayara ayi-16.9-24 okanye 420 / 70-24.
NGABA UMGANGATHO WETYhubhu YANGAPHAKATHI AYAFANI? Umgangatho wetyhubhu yangaphakathi uyahluka ukusuka kumenzi ukuya kumenzi. Umxube werabha yendalo, irabha eyenziweyo, ikhabhoni emnyama kunye nezinye iikhompawundi zeekhemikhali zichonga amandla emibhobho, ukuzinza kunye nomgangatho wayo wonke. KwiiTire ezinkulu sithengisa iityhubhu ezisemgangathweni ezisuka kubavelisi ekuye kwazanywa ukuvavanywa kule minyaka idlulileyo. Lumka xa uthenga iityhubhu zangaphakathi kweminye imithombo kuba kukho imibhobho esemgangathweni ophantsi kakhulu kwintengiso okwangoku. Iityhubhu ezisemgangathweni ezisilelayo ziyasilela kwakamsinya kwaye zibiza indleko ngakumbi ngexesha eliphantsi nangokubuyisela ezinye.
NDIFUNA YINTONI IVEVALI? Iivalves ziza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu ukulungiselela iintlobo ezahlukeneyo zezicelo kunye nolungelelwaniso lweevili. Kukho iindidi ezine eziphambili zezivalo zetyhubhu zangaphakathi eziwela ngaphakathi kwaye ngaphakathi kuzo zimbalwa iimodeli ezithandwayo zevalvethi onokukhetha kuzo: Iitheyibhi zerabha ezichanekileyo -Ivalve yenziwe ngerabha ngoko ke ayibizi kwaye ihlala ihleli. Ivalve ye-TR13 yeyona ixhaphakileyo, isetyenziswa kwimoto, i-trailer, i-quads, i-lawn mowers kunye noomatshini abancinci bezolimo. Inesiqu esinevali esincinci nesingqamene. I-TR15 ine-stem ebanzi / enamafutha esetyenziswa kumavili anemingxunya yevalve enkulu, oomatshini abakhulu bezolimo okanye abaxubushi bomhlaba. IiValve zentsimbi ezichanekileyo -Ivalve yenziwe ngesinyithi, ngoko ke yomelele kwaye yomelele ngakumbi kunabalingani bayo beerabha. Zihlala zisetyenziswa kwizicelo zoxinzelelo oluphezulu, kwaye xa kukho umngcipheko omkhulu wokubanjwa kwevalve / ukunkqonkqozwa ziingozi. I-TR4 / TR6 isetyenziswa kwezinye ii-quads. Eyona ixhaphakileyo yi-TR218 eyivevri ye-agri esetyenziswa kwiitrektara ezininzi njengoko ivumela ukubola kwamanzi. I-Bent Metal Valves -Ivalve yenziwe ngentsimbi, kwaye ine-bend kuyo ngamaqondo ahlukeneyo. Ukugoba kuhlala kugcina isiqu sevalvethi ekufumaneni iingozi njengoko ivili lijika, okanye ukunqanda ukubetha irim yevili ukuba indawo incinci. Zixhaphakile kwiilori nakwizinto zokuphatha oomatshini abanjengee forktrucks, iitraki zesaka kunye neekiriva. Iifolokhwe zihlala zisebenzisa i-JS2 valve. Oomatshini abancinci abanjengelori ezisebenzisa ingxowa basebenzisa i-TR87, kwaye iilori / iilori zisebenzisa izivalo ezinde ezigobile njenge-TR78. Ivaluva zomoya / zamanzi -Ivalve ye-TR218 yivelufa yesinyithi ethe nkqo evumela ukuba amanzi (kunye nomoya) atshizwe ngayo ukuze unkcenkceshele amatayara / oomatshini. Zidla ngokusetyenziswa koomatshini bezolimo njengoogandaganda.
ITHUBA LANGAPHAKATHI LOKUNYE UKUSETYENZISWA KWENKQUBO YOKUTHANDA, UKUQHUBA ETC Iityhubhu zangaphakathi zizinto ezintle eziluncedo, kwaye yonke imihla siyanceda ukucebisa abantu abazisebenzisayo kuzo zonke iintlobo zokusetyenziswa. Ke ukuba ufuna ityhubhu yangaphakathi yokuntywila emlanjeni, ukwakha indalo yesihle, okanye umboniso wefestile yevenkile, siyavuya ukunceda. Nceda unxibelelane neemfuno zakho kwaye iqela lethu liya kukukhomba kwicala elifanelekileyo. Njengesikhombisi esikhawulezayo, thatha isigqibo malunga nokuba ungathanda ukuba isithuba / umngxunya omkhulu kangakanani embindini wombhobho (ubizwa ngokuba bubungakanani bomphetho kwaye ulinganiswa kwii-intshi). Emva koko, thatha isigqibo malunga nokuba ungathanda ukuba ubungakanani obungakanani ityhubhu enomoya (ukuphakama kwetyhubhu ukuba uyimise ecaleni kwakho). Ukuba ungasinika olo lwazi sinokukucebisa ngezinye iindlela onokuthi ukhethe kuzo. Nceda unxibelelane nathi ngalo naluphi na uncedo kunye nolwazi.
Ixesha lokuposa: Aug-15-2020
Igumbi le1608 iDingye International Mansion
Inombolo yama-54 eMoscow Road, Qingdao iZowuni yoRhwebo lwaSimahla